Farqiga udhaxeeya duufaanada, duufaanta iyo duufaanta | Saadaasha Shabakadda
Sergio Gallego | | Duufaannada, Duufaannada
Xilliga dayrta ayaa ah xilli Aasiya iyo Ameerika ay ku dhibaateysan yihiin duufaanno tiro badan, duufaanno, iyo duufaanno. Astaamahan saadaasha hawadu waxay leeyihiin farqi kale oo fara badan inkasta oo dad badani u haystaan ​​inay isku mid yihiin.
Ka dib waxaan si cad u sharaxayaa waxa kasta oo ka mid ah ifafaalooyinkaas caanka ku ah xilligan sannadku ka kooban yahay. si aad u ogaato sida loo kala sooco iyaga oo aan dhibaato lahayn.
Duufaannada waxay caadi ahaan ka dhacaan Waqooyiga Badweynta Atlantik iyo Waqooyiga Badweynta Baasifigga. Waxay kuxirantahay hadba sida ay wax udhaceen, waxaa looqeybinkaraa shan qaybood, mida hore waa tan oo ay kujiraan duufaano wata dabaylo kabadan 250 km / h. Duufaannada waxay u muuqdaan inay daciifaan marka ay dhulka soo dhigayaan sidaa darteed badanaa way ka khatar badan yihiin inta ay biyaha ku jiraan Qaar ka mid ah duufaannada ugu caansan waxay ahaayeen Katrina, Sandy ama Irene.
Duufaanta waxay ka dhacdaa Pacific Northwest iyo West iyo qaybo ka mid ah Badweynta Hindiya. Qaar ka mid ah kuwii ugu xumaa waxay ahaayeen Yolanda ama Nina. Waa astaamaha saadaasha hawada oo la mid ah duufaanta, oo dhacda oo magacyo kale u hesho aagga ay ka dhacdo.
Duufaannada waxaa lagu sameeyaa aagagga kuleylka ah ee meeraha sida Koonfurta Atlantic, Koonfurta Baasifigga iyo meelaha qaarkood ee Badweynta Hindiya ee Koonfur-bari. Duufaannada iyo duufaannada labaduba waa duufaanno kuleyl ah oo dabaylo xoog leh iyo roobab badani ka dhacaan. Si ay duufaan u sameysmaan, biyuhu waa inay ahaadaan heerkul ka sarreeya 28 darajo Celsius iyo dabeylo daciif ah oo leh heerar sare oo jawiga ah.
Waxaan rajeynayaa inaad cadeysay farqiga u dhexeeya ifafaalaha caanka ah sida ay yihiin duufaanno, duufaanno iyo duufaanno iyo hada wixii ka dambeeya waad ogtahay sida loo kala garto iyaga oo aan dhibaato lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Farqiga u dhexeeya duufaanta, duufaanka iyo duufaanka